Kubvumidzwa, Kubatana uye Kukurudzira - Mamirioni Macheki
Kubvumidzwa, Kubatana uye Kukurudzira
11 makore ane ruzivo
Iyo Joint Council yeHutano hweVafambi
Joint Council for the Welfare yeVafambi inoshanda yakazvimirira yenyika kuzvipira, vachirwira kurwira uye kurwisa rusaruro mukubuda kwevanhu uye asylum mutemo uye mutemo.
Iyo Sangano reVakadzora Vekutamira Vanopa mazano
Vedu Wekufambisa maWebvu ndivo mamiririri eThe Association of Regured Immigration Advisers inova inyanzvi Association for Regured Immigration Advisers muUnited Kingdom. Chinangwa cheMubatanidzwa weVakadzora Vanobva Kunharaunda Vanoviga basa ndere kusimudzira hunyanzvi hwevashandi vese vakadzorwa vekugara pamwe nekuvaka kubatana / kuronga pamwe nekuvandudza kutaurirana pakati pemitezo yese inoenda kune dzimwe nyika, masangano uye masangano.
Sangano rekutarisirwa kwevanhu
Vashandi vedu veHurumende inhengo dzeSosaiti yekutarisira kwevanhu uye vanotevedza zvakanakira HR maitiro akapoterera neGlobe.
Ruzivo rweTekinoroji Association of Canada
UK ZveMutemo uye Zvekufambisa Rubatsiro
Mamirioni Makers nevamwe vedu vatinoshanda navo vakamirira uye vari pasi pekutarisirwa kweEEA Magweta vachitevedzera Chikamu 84 cheImigration uye Asylum Act 1999. Tinoshanda pamwe neUK vekune dzimwe nyika vanachipangamazano vanotungamirwa neHofisi yeImigration Services Commissioner (OISC). OISC inoona nezve kudzora vanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu pasi peKomisheni yeKodhi yeMitemo neMitemo.
US Asina Kutamira uye Anobatsirwa
Magweta edu eUS anokwanisa inhengo dzeAmerican Bar Association uye inhengo dzeAmerican Immigration Lawyers Association (AILA), yakavambwa musi wa14 Gumiguru 1946 uye inzvimbo yekuzvidira yemabhawa ine vanopfuura 15.000 magweta uye mapurofesa emutemo vanoita uye vanodzidzisa mutemo wekupinda munyika.
Rubatsiro rweAustralia Yekufambisa
Vedu vekuAustralia Vanowona nezvekupinda munyika pamwe nemagweta vakanyoreswa neMigration Agents Kunyoresa Chiremera (MARA) rinova iro rinonyoreswa zviri pamutemo revarairidzi veAustralia vanoona nezvekupinda munyika sevanoda pasi pemutemo weAustralia.
Iwo Evanofambisa maPangara eCanada Regulatory Council
Kanadha vanoona nezvekupinda kune dzimwe nyika vanopa masevhisi masevhisi kune edu vatengi inhengo dzeVatambi vekupinda muCanada Regulatory Council. Vanowona nezvekupinda munyika yeCanada Regulatory Council (ICCRC) (Conseil de Réglementation des Consultants en Immigration du Canada (CRCIC)) inzvimbo yepamutemo yepasi rose yakasikwa neHurumende yeCanada kutarisira nekudzivirira vatengi vanoda masevhisi eCanada Immigration Consultants.
Latin American Corporate Counselling Association
Vatinoshamwaridzana navo vanoshanda muLatin America inhengo dzeLACCA. Sangano reLatin American Corporate Counselling rinounza pamwe rinotungamira mu-imba zano rinoshanda mudunhu iri, vachivapa mukana wekudyidzana, kugoverana mazano uye kuita kwakanaka uye kushamwaridzana nevezera kune Latin Latin.
European Legal Service chikuru chinangwa ndechekupa Mutemo kuchengetedzwa kune vagari, mapato uye makambani.
Pamhepo Strategic Partner
Kutenda Chaizvo Kutumira Plus, kune kwavo kutsigira uye kuvimba nesu.
Isu takangotaura zvishoma nezvezvitadzo zvedu uye kubatana.
Nezvikonzero zveunyanzvi, zvakanyanya kuoma kuburitsa masangano edu ese, asi, isu takazvipira kukupa rubatsiro rwakanaka uye basa, kuti iwe uite zvinangwa zvako, zvido zvako uye mishoni, kanenge kupi zvako mupasi rose pamitengo yepamusoro yemakwikwi uye dhizaini yekubhadhara.
* Cherechedzo Isu hatigamugashire basa uko isu tine kusahadzika kushoma kwekupa yakanakisa sevhisi yekusimbisa.